#BIM - रिडिट MEP - Geofumadas प्रयोग गरेर हाइड्रोस्यानेटरी प्रणालीहरू
सेनेटरी स्थापनाहरूको डिजाईनका लागि REVIT MEP प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्।
यस कोर्समा स्वागत छ Revit MEP को साथ सेनेटरी सुविधाहरू.
तपाइँ योजनाहरूको निर्माण गर्न इन्टरफेसबाट हावी हुनुहुनेछ।
तपाई सबैभन्दा सामान्य, वास्तविक आवासीय परियोजना4स्तरहरूको साथ सिक्नुहुनेछ।
मँ तपाईंलाई चरण-चरण मार्गनिर्देशन गर्दछु, म अनुमान लगाउँदिन कि तपाईंलाई केही पनि थाहा छ रिटिट गर्नुहोस्, न त सेनेटरी.
यदि तपाइँ पछुतो गर्नुहुन्छ वा तपाइँले अपेक्षा गरेको जस्तो गर्नुहुन्न भने, तपाइँ तपाइँको फिर्ताको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ।
यो समयको साथ विकास जारी रहनेछ, सुधार र अद्यावधिकहरू थप गर्दै।
नोट: को सामग्री YouTubeयसले तपाईंलाई प्रोग्राम कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँछ तर यो अव्यवस्थित छ र कुनै नियम वा डिजाइन मापदण्ड थाहा छैन। कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस् MEP लाई रिभिट गर्नुहोस् यो थाहा छैन हाइड्रोसेनेटरी, वा कुनै अन्य प्राविधिक शाखा जस्तै इलेक्ट्रिकल वा संरचनात्मक। म तपाईंलाई आफैंले यो जाँच गर्न आमन्त्रित गर्दछु।
यहाँ तपाईं सिर्जना गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रयोग गर्न सिक्नुहुनेछ हाइड्रोस्नेटरी विमानहरू कुनै पनि निर्माण परियोजना को लागी। यस कोर्सको सामग्रीलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, जहाँ प्रत्येक एकको महत्त्वपूर्ण चरणको विकास गर्दछ हाइड्रोस्नेटरी डिजाइन:
चिसो र तातो पानी Revit MEP संग.
पहिलो मोड्युल कार्यक्रम को BIM Revit संग: सेनेटरी स्थापनाहरू।
यहाँ तपाईं एक परियोजना शुरू गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रयोग गर्न सिक्नुहुनेछ रिटिट गर्नुहोस्लोड स्वास्थ्य परिवारहरु र सिर्जना गर्नुहोस् तातो र चिसो पानी पाइप प्रणाली। तपाईं प्रोग्राम-द्वारा प्रस्ताव गरिएको गणना उपकरणहरूको साथ यी प्रणालीहरूको आत्म-आयाम गर्न पनि सिक्नुहुनेछ।
पहिलो खण्ड - परिचय र उपकरणहरू:
वास्तु योजना र सेनेटरी उपकरणहरू लोड गर्न सिक्नुहोस्।
दोस्रो खण्ड - पाइप प्रणाली:
पाइपहरू आफैंमा र स्वचालित रूपमा लोड गर्न र जडान गर्न सिक्नुहोस्।
तेस्रो सेक्सन - तातो पानी र व्यास:
तातो पानी एकीकृत गर्न र स्वचालित रूपमा व्यासको हिसाब गर्न सिक्नुहोस्।
ड्रेनेज र भेन्टिलेसन Revit MEP को साथ.
दोस्रो मोड्युल कार्यक्रम को BIM Revit संग: सेनेटरी स्थापनाहरू।
यहाँ तपाईं सिर्जना गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रयोग गर्न सिक्नुहुनेछ जल निकासी र भेन्टिलेसन प्रणालीसिफन्स जस्ता महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू सहित। थप रूपमा, तपाईंसँग सिमेट्रिकल प्रोजेक्टहरू र भवनहरू छिटोमा काम गर्न डिजाईनको नक्कलहरू सिर्जना गर्ने क्षमता छ।
पहिलो खण्ड - नाली:
नाली राख्न र ड्रेनेज प्रणालीहरू सिर्जना गर्न सिक्नुहोस्
दोस्रो खण्ड - सिफन्स:
परिवारहरू सम्पादन गर्न र प्रणालीहरू बीच सही अन्तर्क्रिया सिक्नुहोस्।
तेस्रो सेक्सन - प्रतिकृति:
भवनहरू वा सममितीय बोटहरूसँग काम गर्दा डिजाइनहरू नक्कल गर्न सिक्नुहोस्।
चौथा अनुभाग - भेन्टिलेशन:
ड्रेनेज प्रणालीमा तिनीहरूलाई जडान गर्न भेन्टहरू सिर्जना गर्न सिक्नुहोस्।
Revit MEP को साथ हाइड्रोस्नेटरी कम्पोनेन्टहरू.
तेस्रो मोड्युल कार्यक्रम को BIM Revit संग: सेनेटरी स्थापनाहरू।
यहाँ तपाईं लोड वा मोडेल सिक्नुहुनेछ पम्पहरू, अटोक्लेभहरू, ट्याks्कहरू, लगहरू, सेप्टिक, ग्रीस ट्र्यापहरू र अन्य घटकहरू हाइड्रोसेनेटरी विभिन्न तरिकाहरूमा
पहिलो भाग - आपूर्ति घटक:
बम र ट्याks्क लोड गर्न सिक्नुहोस्। एउटा सिस्टर्न मोडेल पनि सिक्नुहोस्।
दोस्रो सेक्सन - संग्रह घटक:
मोडेल रेकर्ड र ग्रीस जाल बिभिन्न तरीकाहरूमा जान्नुहोस्।
Revit MEP को साथ योजनाको निर्माण.
चौथो मोड्युल कार्यक्रम को BIM Revit संग: सेनेटरी स्थापनाहरू।
यहाँ तपाईले लेबल, कल, सेक्सन, टेबल, विवरण र अन्य तत्वहरूको सिर्जना गर्न सिक्नुहुनेछ जुन प्रस्तुतिको लागि आवश्यक छ हाइड्रोस्नेटरी विमानहरू कुनै पनि निर्माण परियोजना को।
पहिलो सेक्सन - योजनाहरू, लेबलहरू र कलहरू:
पाइप र उपकरणहरू लेबल गर्न सिक्नुहोस्, टेक्निकल नोटहरू थप्नुहोस् र समान विमानमा विभिन्न तराजुको साथ काम गर्नुहोस्।
दोस्रो खण्ड - तालिकाहरू, खण्डहरू र विवरणहरू:
मात्राको तालिकाको साथ तत्वहरूको मात्रा पत्ता लगाउन र विभिन्न बाह्य स्रोतहरूबाट महत्त्वपूर्ण विवरणहरू आयात गर्न सिक्नुहोस्।
नोट: यो कोर्स 2018 संस्करणको साथ विकसित गरिएको थियो। सामग्रीको 99% उस्तै नै रहन्छ, तथापि कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूको लागि छलफल फोरमहरू जाँच गर्नुहोस्।
एक Revit छात्र इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुहोस्
Revit मा एक प्रोजेक्ट सेट अप गर्नुहोस्
हाइड्रोसेनेटरी प्रणालीहरू सिर्जना, हेरफेर र परिमार्जन गर्नुहोस्
Revit को आधारभूत ज्ञान सिफारिस गरिएको हो, तर आवश्यक छैन।
सेनेटरी स्थापनाहरूको आधारभूत ज्ञान सिफारिस गरिएको छ, आवश्यक छैन।
ईन्जिनियरिंग वा वास्तुकला पेशेवरहरू
ईन्जिनियरि or वा आर्किटेक्चर विद्यार्थीहरू
प्लम्बिंग / प्लम्बिंग टेक्निसियनहरू
व्यापारी र पार्ट्स निर्माणकर्ता
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो #Land - सिभिल कोर्स 3D नागरिक कामका लागि - स्तर 1
अर्को पोस्ट #GIS - Android का लागि जियोलोकेशन कोर्स - html5 र Google नक्सा प्रयोग गर्दैअर्को »